Ukuqhagamshela iAudiense: Elona qonga liphezulu leNtengiso le-Twitter kuShishino | Martech Zone
Ngelixa uninzi lwehlabathi selwamkele amanye amajelo eendaba ezentlalo, ndiyaqhubeka ukuba ngumlandeli omkhulu we-Twitter. Kwaye i-Twitter iyaqhubeka nokunceda ukuqhuba ukugcwala kwiindawo zam zobuqu nezobuchwephesha ukuze ndingaze ndiyinike nanini na!
Ukudibanisa iAudiense liqonga elenzelwe ukuThengisa nge-Twitter kunye nokuthenjwa ngamawaka eebranti kunye neearhente kwihlabathi liphela ukuya:
Ulawulo loLuntu noHlahlelo -Fumana ulwazi oluchanekileyo malunga noluntu lwakho kwi-Twitter. Yazi abalandeli bakho ngokunzulu kwaye unxibelelane ngokufanelekileyo nabo
Iincoko kunye nosasazo -Umakhi we-Chatbot we-Audiense Connect, unokwenza i-chatbot yakho yokungena ngaphakathi konqakrazo nje olumbalwa. Zibandakanye ngqo nababhalisi / abathengi bakho.
Ukubeka iliso phambili kunye nokumamela -Gqibezela ukugubungela umhlaba wexesha-lokwenyani kunye nembali (ukusukela ngo-2006) umxholo we-Twitter. I-Audiense ibonelela ngohlalutyo lwencoko kunye nokucofa umkhankaso omnye.
Abaphulaphuli abenzelwe i-Twitter beNtengiso -Yila abaphulaphuli abasebenza ngokugqibeleleyo kwi-Twitter kwintengiso. Kungakhathaliseki ukuba i-niche okanye ibanzi ngabaphulaphuli bakho. Ngalo lonke ixesha-ukungqamanisa neakhawunti yakho yeNtengiso ye-Twitter.
Iimpawu zoQhagamshelo lweaudio
Elona xesha lilungileyo lokuTweet -Fumanisa ukuba leliphi ixesha lakho elifanelekileyo lokuthumela i-tweet kwaye uthathe ithuba kuyo yonke i-tweet oyithumelayo. Fumana elona xesha lilungileyo le-tweet kwisampulu yabasebenzisi kwaye ufunde xa abaphulaphuli bakho bekwi-Intanethi.
Bhrawuza uLuntu lwakho lweTwitter -Fumana ulwazi oluchanekileyo malunga noluntu lwakho ngeendlela ezahlukeneyo, bazi abalandeli bakho ngokunzulu kwaye unxibelelane ngokufanelekileyo nabo. Maka kwaye wandise ulwazi lwe-Twitter.
Icebo lokucoca iTwitter, Landela, kwaye ungalandeli -Fumanisa abalandeli bakho abatsha kwaye ubalandele ngokulula. Yiba nobulumko kwaye ube nembeko. Buyisela oku kulandelayo ukuba ngumgaqo-nkqubo wakho. Fumanisa abahlobo abanengxolo, abenzi bokugaxekile, kunye nabasebenzisi abangasebenziyo. Nceda ujonge kwimithetho nemigaqo-nkqubo ye-Twitter.
Uhlalutyo lwe-Twitter loKhuphiswano -Thelekisa ukuya kwezinye iiakhawunti zeTwitter okanye abo ukhuphisana nabo ukuze ubone ukuba ngubani onabalandeli abaninzi kwaye ngoobani, abo basebenzisa ii-tweets ngakumbi, zizinto abazithumela ngokubanzi nge-tweet njl.
Abaphulaphuli be-Twitter kunye nokuqonda koLuntu -Ukuba ufuna ukwazi umgangatho woluntu lwakho lwe-Twitter le yingxelo egqibeleleyo: iitshathi zommandla wexesha, iitshathi zolwimi, abasebenzisi ngenani labalandeli, abasebenzisi ngomsebenzi wakutshanje, njl.
Lawula uLuhlu lwe-Twitter -Cwangcisa abalandeli bakho kunye nabahlobo bakho ngokwenza uluhlu lwe-Twitter. Zibandakanye nabantu abachaphazelekayo ngendlela efanelekileyo yonxibelelwano.
Umakhi weTwitter oZenzekelayo -Gcina ixesha ngokwenza imithetho ezenzekelayo xa umntu othile ebandakanyeka nawe. Umzekelo: thumela i-imeyile ukuba umntu onabalandeli abangaphezu kwama-20,000 uyakulandela. Smart, akunjalo?
I-Twitter ngqo ye-Chatbots kunye noSasazo -Umakhi we-Chatbot we-Audiense Connect, unokwenza i-chatbot yakho yokungena ngaphakathi konqakrazo oluncinci kwaye uzibandakanye nababhalisi okanye abathengi ngeTwitter usebenzisa iMiyalezo ngqo ngqo.
Uhlalutyo lweTweet -Ncedisa ii-Analytics zamahhala ezibonelelwa yi-Twitter ngokuqonda okupheleleyo kokuzibandakanya neetweets zakho ezingcono. Yongeza kuluhlu, okanye ujolise kubo ngeTwitter eyenzelwe abaphulaphuli kwimikhankaso yamva.
Ingxelo ye-Twitter yokuNgena -Fumana iziphambuka ezinentsingiselo kwaye uqonde ubudlelwane phakathi kwabaphulaphuli ukuze ufumane ubukrelekrele obufunayo ukugxila kubaphulaphuli abathile ekujoliswe kubo. Jonga ukuba sisebenza njani na isicwangciso sentlalontle ngasinye kwaye ubone ukuba zeziphi iiakhawunti ezivela kumacandelo entengiso afanayo anenani elifanayo labasebenzisi.
Ingxelo yokuNxibelelana kwe-Twitter -Ingxelo yoBumbano ibonelela ngendlela ebonakalayo yokuqonda ngcono umdla wabaphulaphuli bakho kwaye ke wenze izigqibo ezizezolwazi malunga nomxholo wexesha elizayo oya kuthi uhlangane kwaye ubandakanye abaphulaphuli. Sebenzisa iNgxelo yoBumbano ukubona ukuba ngubani olandela kakhulu kwi-Twitter.
Umphathi we-Twitter oPhezulu -Khawulezisa nangokungazami ukudibanisa ukhetho lweefilitha zomsebenzisi-iiprofayili, ubudlelwane kwezentlalo, kunye nemisebenzi yomsebenzisi ukwenza abaphulaphuli ababodwa abaphucula ukubaluleka kunye nokusebenza kweentengiso zakho ze-Twitter kunye nemikhankaso ye-Organic.
Ukubeka iliso kwi-Twitter -Gqibezela ukugubungela umhlaba wexesha-lokwenyani kunye nembali (ukusukela ngo-2006) umxholo we-Twitter. I-Audiense ibonelela ngohlalutyo lwencoko kunye nokucofa umkhankaso omnye.
Abaphulaphuli abenzelwe i-Twitter -Yila abaphulaphuli abasebenza ngokugqibeleleyo kwi-Twitter kwintengiso. Kungakhathaliseki ukuba i-niche okanye ibanzi ngabaphulaphuli bakho. Ngalo lonke ixesha-ukungqamanisa neakhawunti yakho yeNtengiso ye-Twitter.
Zama uqhagamshelo lweAudiense
tags: abaphulaphuliaudiense qhagamshelaelona xesha lilungileyo lokuthumela i-tweetUhlalutyo lwe-tweetTwitterIntengiso ye-twitterIngxelo yokuhambelana kwe-twitterUhlalutyo lwe-twitterUlawulo lwabaphulaphuli be-twitterUkuzenzekelayo kwi-TwitterIngxoxo ye-twitterUkuqonda koluntu kwi-twitterulawulo loluntu lwe-twitterUhlalutyo lomncintiswano we-twitterIdashboard ye-twittertwitter ngqo umyalezo bottwitter ngqo umyalezo wengxoxotwitter landelaIngxelo yendlela yokuhlangana ye-twitterUluhlu lolawulo lwe-twitteresweni twitterUmgaqo wokuphendula kwi-twitterImithetho ye-twitterababukeli abenzelwe i-twittertwitter ayilandeli
Nciphisa iZithuba ezihambelana neJetpack ukuya kumhla othile